Izipikha zeSonos sezivele ziyahambisana noMsizi weGoogle eSpain naseMexico | Izindaba zamagajethi
Eminyakeni yakamuva, izipikha ezihlakaniphile eziphethwe ngabasizi ababonakalayo seziyilungu lomndeni. Njengamanje kujwayelekile ukubona i-Amazon Echo, iSonos, i-HomePod noma iGoogle Home emakhaya amaningi. Idivayisi yakamuva yalolu hlobo ukuthola isibuyekezo esikhulu ibanga leSonos, ekugcineni iyahambisana nomsizi weGoogle.
Ukuhambisana kweSonos noMsizi weGoogle kuceliwe futhi kuthathe isikhathi eside kakhulu kunalokho inkampani ebikuhlelile ekuqaleni, kodwa-ke, kusukela emahoreni ambalwa adlule, ekugcineni singalanda isibuyekezo sesoftware esenza ukuthi ihambisane nayo, a ukubuyekeza osekuvele kutholakala eSpain nakwamanye amazwe ayi-7.
Ngenxa yokuhlanganiswa koMsizi weGoogle nobubanzi bezipikha zeSonos, singakwazi sebenzisa izwi nedivayisi ukudlala ingoma, engeza uhlelo kulayini wokudlala, ubuze ngesimo sezulu, ulawule i-automation yethu yasekhaya ...
Kuze kube manje, umsizi weGoogle ubesebenzisana nezikhulumi zeSonos e-United States, United Kingdom, Germany, Canada, Australia, France, Netherlands, Sweden naseDenmark. Ngemuva kokubuyekezwa kokugcina, ayitholakali eSpain naseMexico kuphela, kodwa futhi iyatholakala nge I-Austria, i-Ireland, i-Italy, iNorway, iSingapore neSwitzerland.
ISonos inkampani yokuqala ukuvumela abasebenzisi sebenzisa abasizi ababili ababonakalayo kusuka kumadivayisi akho: i-Amazon's Alexa neGoogle Assistant. Ukubona indlela abasizi abayithathayo abayithathayo, bekungeke kube kubi uma ngokuzayo bengakwazi ukusebenzisana ukuze bagcwalise imisebenzi abangakwazi ukuyenza ngawodwana.
Inzuzo yokuba nabasizi ababili bezwi emikhiqizweni yeSonos ukuthi singakwazi setha idivayisi ngayinye ye-Sonos ngomsizi ohlukileIsibonelo, i-Amazon's Alexa on Sonos Beam egumbini lokuphumula kanye noMsizi weGoogle ekhishini. Uma ufuna isipikha sekhwalithi ukujabulela umculo wakho owuthandayo futhi ujabulele izinzuzo ezinikezwa umsizi obonakalayo, enye yezinketho ezinhle kakhulu ezitholakala manje emakethe yiSonos.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » Izipikha zeSonos sezivele ziyahambisana noMsizi weGoogle eSpain naseMexico
Ukubuyekezwa: I-Rockbox Bold X, yakamuva evela ku-Fresh ´N Rebel, ehlukile ku-Ultimate Ears?